Mohamed Salah oo qeexay furaha Liverpool si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League – Gool FM - Idman news
Mohamed Salah oo qeexay furaha Liverpool si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League – Gool FM
(Liverpool) 15 Ok 2021. Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa carabka ku adkeeyay baahida kooxda ee ah inay bixiso heerkeeda ugu wanaagsan si ay ugu guuleysato hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyadoo loolan xoog leh uu jiro.
Hadalka Salah ayaa yimid kaddib markii loo caleemo saaray abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Liverpool, kaddib markii uu ku guuldarreystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League oo loo caleemo saaray xiddiga Manchester United ee Cristiano Ronaldo.
Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waa inaan bixinnaa heerkeena ugu wanaagsan si aan wax ugu guuleysano, waxaan u maleynayaa inaan tayadaas leenahay, waxaan leenahay koox heer sare ah, waana inaan nafteena ku dhiirrigelinnaa inaan isku dayno inaan wax ku guuleysano.”
“Waxaan u maleynayaa in qof walba uu u fikiro si isku mid ah, taasina waa waxa aan u baahanahay, waxaan u baahanahay inaan maanka ku hayno inaan ku dhameysano xilli ciyaareedka inaan wax ku guuleysano.”
Previous Mbappé dartiis… Real Madrid oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato laacibkan – Gool FM
Next “Ma oggolaan lahayn in Messi uu baxo” – Josep Maria Bartomeu – Gool FM